ဘာသာပြန် – Page2– HI Burma
06/04/2021 474 views
Throughout the Spring Revolution against the military coup, despite the risks, women have stood at the forefront of Myanmar’s protest movement. Some have been arrested, brutally harassed, and even killed. Their memory and stories must not be forgotten and must serve as lessons for the next generation.
Honest Information (HI),awomen’s media platform is creating this record of women’s participation in the 2021 Spring Revolution, for the period of February 1 to March 31, 2021. Our hope is for this to becomeamemorial document for the women’s movement after the revolution is over.
29/03/2021 514 views
23/12/2020 1277 views
“လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က သူ့ရဲ့အမနှစ်ယောက်အနက်က တယောက်ဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အိမ်ထောင်ကွာရှင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ၁၅ ရက် အထိန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက် ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။”
29/10/2020 1051 views
“အရင်က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကြေညာချက်တွေမှာ အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဒါတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅ လို ပီပြင်တဲ့ သြဇာ သက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိတိကျကျ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ တောင်းဆို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။”
26/06/2020 331 views
by Pyo 27/03/2020
27/03/2020 252 views
“ Covid 19 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုက အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးထိခိုက်စေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာအာမခံချက်မှမရှိတဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုထိခိုက်တယ်”
by Pyo 07/03/2020
07/03/2020 431 views
by Moe Zaw 04/03/2020
04/03/2020 318 views
ထိုဆန္ဒပြပွဲတွင် မေရာပိုက်ဘီး အမျိုးသမီး ( ၁၂ )ဦးခန့်က အမှတ် (၁၇ )အာသံရိုင်ဖယ် ဂိတ် ရှေ့သို့ သွားရောက်ကာ အဝတ်အစားများချွတ်၍ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုသည် အမြင့်မားဆုံးအခြေအနေ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့က “Indian Army Rape Us” “Indian Army Take Our Flash” ဟူသော စာတမ်းများကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒပြခဲ့သည်။
by Moe Zaw 20/02/2020
20/02/2020 513 views
မဏိပူရီ အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် အမျိုးသားများနှင့်ရင်ဘောင် တန်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရုံမျှမကဘဲ မဏိပူရီလူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ၎င်းတို့က ဦးဆောင်၍ လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံရေးနှင့် သမိုင်းသုတေသီများ သုံးသပ်ပါသည်။ ယင်းအမျိုး သမီးလှုပ်ရှားမှုများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဤပြည်နယ်ငယ်လေး၏ ထူးခြားမှုတခုဟုပင် ဆိုနိုင် ပါ သည်။
by Thway-Sagaing 20/12/2019
20/12/2019 353 views
ဘာသာရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု မလိုလားသူများနှင့် သံဃာတော်များ၏ ဆန့်ကျင်မှု ခံခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့က ထေရဝါဒဘိက္ခုနီ ဆိုသည်မှာ မရှိတော့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်